” လိုင်း “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ” လိုင်း “	13
” လိုင်း “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jan 3, 2016 in Photography | 13 comments
ကိုပေါက် လက်ဆောင် အလင်းပုံရိပ်များ
လိုင်း လိုင်း ၂
E-မြောက်မြောက် says: လိုင်းဟုတ်ပါဘုဗျာ
alinsett says: အနုပညာပစ္စည်းတချို့ဟာ
ဗိသုကာပညာရှင်တွေတောင် လိုက်တုမမီ မဖန်တီးနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတဲ့အတွေးတစ်စ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ကူးပေါက်ရာလေး
မင်း ခန့် ကျော် says: မှန်းကြည့်တော့
ဦးပိန် တံတားးလို့ ။
ဆောင်း ရဲ့ နေ ကို ဖမ်းမိ တာလို့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်ပါတယ် ဦးပိန်တံတားမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလက ရိုက်လာတာပါ
kai says: ဦးပိန်ဆိုတဲ့လူကြီးလုပ်ပေးသွားတာ.. မြန်မာ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေအပါအ၀င်.. ဘိုဓာတ်ပုံဆရာတွေပါ ပုံတွေတော်တော်ရ…
တံတားနဲ့တင်.. ဒေါ်လာ သန်းချီတော့ ၀င်ငွေရှိနေလောက်ပြီ…။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မှန်ပါ့
Mike says: .ဦးပိန်ကိုဒီခရစ္စမတ်နေ့ကရောက်သေးတယ်…ပိတ်ရက်မို့လားမသိ..လူတွေတံတားပေါ်အပြည့်ပဲဗျာ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်ကဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့ဆိုရင်
အောင် မိုးသူ says: ကောက်လိုင်း
kai says: ဦးပိန်တံတားနဲ့လုပ်စားလို့ရတယ်ဆိုတာကို.. ပြတဲ့ပြယုတ်တခုတွေ့လို့…။
အဲလိုရှေးဟောင်းတတားတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့မြို့တွေတော်တော်များများ လုပ်စားနိုင်ကြတာပါ…။
အဓိက ကတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေပေါ့လေ..။
Love lock – Wikipedia, the free encyclopedia
A love lock or love padlock isapadlock which sweethearts lock toabridge, fence, gate, or similar public fixture to symbolize their love. Typically the sweethearts’ …
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အခုခေတ် ဟန်းဖုန်းတွေပေါတော့
kai says: ဆဲလ်ဖုံး ဦးပိန်တံတားပေါ်ယူလာရင် စုံတွဲကွဲတတ်တယ်.. ဆိုပြီး…
ငရဲ-နတ်ပြည်ပွဲစားတွေ.. လာဘ်ပေးပြီး လုပ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.